हाम्रो पुरुषार्थ अंक ८४
महाकवि देवकोटाप्रति श्रद्धाञ्जलि
एउटा कलमवीर जो नेपालको माटोमा फुलेको थियो । एउटा स्रष्टा जसले मानवता र स्वतन्त्रताका लागि क्रान्ति र विद्रोहको युगवाणी उरालेको थियो, स्वच्छन्द, उन्मुक्त भावहरु लोकप्रिय लोकलयमा गाएको थियो । हिमालझैं उचो प्रतिभा बोकेर अज्ञानी समाजमा उन्मादी ठानिएको थियो । एउटा कल्पनाशील, स्वप्नशील दिव्य करmणामय आत्मा बनी लोकहितार्थ प्रमिथस बनेर झरेको थियो पृथ्वीमा ऊ एउटा देवदूत ! एउटा देवपुत्र ! अमरावतीबाट ।
राजालाई रंक र रंकलाईं राजा देख्नसक्ने दिव्य दृष्टिवाला त्यस स्रष्टालाई हामी सम्झन्छौं । स्वच्छन्दताका स्वप्नबीजहरु नेपाली भाषामा उमार्ने, फुलाउने र माला गाँस्ने त्यस अद्भुत मालीलाई हामी श्रद्धा गर्दछौं । नेपाली भाषामा काव्य, कविता र निबन्धमा नवयुग डाक्ने त्यस कविकोकिललाई हामी आदर गर्छौं । वाल्मीकि र व्यासझैं विलक्षण सृजनासामथ्र्य हुने त्यस शारदापुत्रलाई, त्यस महापुरmषलाई वन्दना गर्दछौं ।
लाग्छ दन्त्यकथाझैं जसको जीवनी, आँधीहुरीको कथाझैं । लाग्छ जसको प्रतिभा विलक्षण, दिव्य र जादूमय । मान्छेको चेतनाको धुरी कति अग्लो हुन्छ ? त्यो धुरी थियो ऊ । मान्छेको सृजनशीलताको चुली कति अग्लो हुन्छ ? त्यो चुली थियो ऊ । अनुपम, अतुलनीय र बेजोड । वर्डस्वर्थ र शेली होचा छन् ऊसँग । पन्त, प्रसाद, निराला ती तीन बराबर ऊ एक छ । जसलाई सम्झँदा हाम्रो छाती चौडा हुन्छ । जसलाई सम्झँदा हाम्रो शिर श्रद्धाले झुक्छ । त्यस स्रष्टालाई सगौरव सम्झन्छौं हामी ।
२०७६ साल कार्तिक २७ गते हामीले १११ औं देवकोटा जयन्ती मनायौं । अनुपम काव्यस्रष्टालाई सम्झेर कृतज्ञता र श्रद्धाका फूलहरु चढायौं । जसको सम्झना र सम्मानमा ५१ वर्षपहिलेदेखि किरण पुस्तकालयले विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजन गर्दै आइरहेको छ । प्रज्ञा र प्रतिभाका प्रतिमूर्ति महाकविलाई सम्झेर यस ज्ञानमन्दिरको परिकल्पना भएको थियो । त्यहीं महान् आत्माको श्रद्धाञ्जलिस्वरुप प्रस्तुत अड्ढ समर्पित छ ।